Sandals Resorts: Tadzoka!
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hotera & Resort Nhau » Sandals Resorts: Tadzoka!
Ese maSandals Resorts ari kuvhurwa, kutaura zvazviri, mazhinji akatovhurwa neakasara nekuda kwekuvhura munguva pfupi inotevera. Iyo nguva yakwana nekuda kwezvikonzero zvakawanda zvekuita zvirongwa zvekufamba zvesandals zororo nhasi. Iko hakuna kudikanwa kwekumirira venhau venyika pamwe nesarudzo dzese dziripo.
Kutanga uye pamberi pezvese, Sandals yakagara ichitora hutano uye chengetedzo zvakanyanya zvakanyanya kunzvimbo dzayo dzekutandarira. Iye zvino kupfuura nakare kose, maSandals ari kutora mamwe matanho ekuchengetedza kugara kwevaenzi nemaSandals Platinum Protocol avo eUtsanana. Vhura nzvimbo dzekuchengetera dzakasimbisa maprotocol avo kuti abatanidze nzvimbo dzese dzekubata kunzvimbo dzese dzekushanya kubva panguva iyo muyenzi anosvika panhandare yendege, kuburikidza neyakaitika rese chiitiko. Aya mamwe maprotocol uye anovimbisa hutsanana zviyero zvinowedzeredza hutano uye kuchengetedzwa matanho evashanyi vanotsvaga rugare rwepfungwa muCaribbean.
Antigua: Zvino Vhura
Bharabhasi: Zvino Vhura
Jamaica: Zvino Vhura
Saint Lucia: Zvino Vhura
Grenada: Vhura Gumiguru 1
Bahamas: Vhura Mbudzi 1
Asi chimbomira, kune zvimwe!
Shangu dzinoda kuti vashanyi vayo vanzwe zororo risina kunetseka. Ndosaka maSandals Resorts aine akanakisa maitiro uye marongero akagadzirirwa kuisa pfungwa dzako mukusununguka. Kunyangwe kuri kubhuka kuripo kana chimwe chakagadzirwa izvozvi, maSandals akafukidza vashanyi vayo.
Yemahara Kamuri Kanzura ne100% Kudzoserwa
Kukanzurwa kwemahara kwemahara kunowanikwa kwekuchengetedzwa kwakamiswa mazuva makumi matatu nemasere kana kupfuura vasati vatarisa zuva (kunze kweOver-The-Water Suites). Izvi zvinongoshanda chete kune yepasi / yekamuri chikamu chebhuku. Kukanzurwa kwendege kunoenderana nezvirango nevatakuri vendege.
Iyo Sandals Yakanakisa Mutengo Wechivimbiso inobvumira vashanyi kuti vanzwe chokwadi kuti iro kamuri mwero rakagamuchirwa ndiwo mutengo wakanyanya. Vaenzi vanogona kubhuka vaine chivimbo pamhepo, kuburikidza neanofarira mumiriri wekufamba, kana nekufona 1-888-SANDALS. Kana mukati maawa makumi maviri nemana ekubhuka zororo repamhepo pa www.mumusi.com mutengo wakaderera wezuva rimwe chete rekuuya, huwandu hwehusiku, nenzvimbo dzekugara dzinowanikwa, Sandals ichadzorera mutsauko.
Kubhadharisa nzvimbo kunokodzera kunowana mukana wekuti "ubate kamuri" nemari inosvika madhora makumi mana nemapfumbamwe pamunhu kubatsira kuronga kwekufamba. Kusarudza iyo "bata" sarudzo zvinoreva kuti kiredhiti kadhi inoshandiswa dhipoziti inozobhadhariswa imwezve $ 49 mumazuva makumi maviri nerimwe. Mari yese yasara yezororo inozobhadhariswa mazuva makumi mashanu nemashanu zuva rekutangisa risati rasvika.
Vaenzi vanogona kukiya pazororo ravo rinotevera neSandals 'inoshanduka uye isingadhuri mari uye hapana hurongwa hwekubhadhara mubereko. Mutengo weiyo Luxury Inosanganisirwa® Sandals zororo inogona kutambanudzwa pamusoro pemwedzi yakati wandei kana uchibhuka wakananga neSandals, nevashanyi vane mukana wekubhadhara iwo mu3- kusvika kumwedzi wemakumi maviri nemana masitendi.
Sezvo nzvimbo dzeSandals dziri munzvimbo dzakasiyana siyana dzeCaribbean, dzimwe dzadzo dzakapindura kune denda repasi rose (COVID-19) nekuzivisa zvirambidzo zvemuno kune vashanyi kana nzvimbo dzekutandarira, panogona kunge paine chinokanganisa kuSandals Resort Exchange Chirongwa. Chirongwa chekutsinhana kwekushandira chakanangana, uye zvichiteerana, nezvose zvinorambidzwa nehurumende, kusanganisira izvo zvinotadzisa kugona kwevaenzi kufamba pakati pezvivakwa kana kukanganisa kugona kweSandals resorts 'kutamisa zvakachengeteka vashanyi pakati pezvivakwa kana kuvhurika uye kushanda. Chirongwa ichi chichava chisina basa pazvinorambidzwa kana mukutongwa kweSandals kwakashanda zvisingaite nekuda kwekurambidzwa kwenzvimbo kana denda. Senguva dzose, hutano uye kuchengetedzeka kwevaSandals vashanyi zvinogara zvichitungamira